दुर्गम गाउँकी किसानले ७० हजारको पुरस्कार जितिन् – Newsagro.com :
दुर्गम गाउँकी किसानले ७० हजारको पुरस्कार जितिन्
December 7, 2015 NewsAgro0Comments Agriculture, Baglung, Heifer International Nepal, JONAA Nepal Agricultural Journalists Academy Kathmandu, livestock, Nepal, Newsagro.com
बाग्लुङ, २१ मंसिर / उनी गोठमा बाख्रालाई घाँस हाल्दै थिईन्। घरमा मोवाइलमा घण्टी बज्यो। छोरीले ‘आमा तपाईको फोन आयो’ भन्दै गोठमै ल्याएर मोवाइल थमाइन्। एक जना पुरुषले ‘टुल्की दिदी तपाई’ लाई बधाई छु भने। तर,उनी अक्क न बक्क भइन्।
घाँस-दाउरा, मेलापात गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएकी जिल्लाको दमेक-८ की टुल्की थापा सापकोटाले बधाईसँग उनको कुनै साइनो थिएन्। मोवाइलबाटै ‘तपाईँले ७० हजार रासीको पुरस्कार जित्नु भयो’ भन्दा उनी अचम्ममा परिन्। अनपढ सापकोटाले मनमनै गुनिन् र सोधिन् ‘मलाई के को पुरस्कार ? म गोठालले के काम गरेको छु ?’
उनले आँफुलाई कमजोर ठाने पनि जिल्लाको दुर्गम गाउँकी सापकोटाको मेहनत र परिश्रमबाट ७० हजार रासीको ‘स्वर्णीम प्रतिभा पुरस्कार’ जित्न सफल भएकी छन्। हेफर इन्टरनेस्नलले कृषि पेशा तथा पशुपालनको माध्यमबाट जीवनशैलीमा परिवर्तन भएका किसानलाई हरेक वर्ष यो पुरस्कार दिँदै आएको छ।
आर्थिक अवस्था कमजोर, सामाजिक विभेद र पारिवारिक अपहेलनामा परेकी टुल्की पशुपालन र तरकारी खेतीको माध्यमबाट आँफुलाई सफल किसानको रुपमा उभ्याएकी हुन्। पुरस्कार पाए उनी निकै प्रफुलित छिन्। ‘यत्रो पुरस्कार पाउँला भनेर कल्पना पनि गरेकी थिइन,’ उनले भनिन्, ‘अहिले सबैले बधाई दिँदा निकै खुसी लागेको छ।’
हेफरको सहयोगमा स्थानीय दीपज्योती युवा क्लब,बागलुङबाट सुरुमा १२ बाख्रा पैँचो लिएकी सापकोटाले ती सबै बाख्रा फिर्ता गरेर अहिले बार्षिक चार लाख कमाउँछिन्। पशुपालनले उनको जीवनमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ। ब्राह्मण समुदायका केटासँग विवाह गरेपछि बिस्थापित मगर समुदायकी थापालाई ‘बाख्रा पालन’ समुदायसँग पूर्नमिलन हुने माध्यम बनेको थियो।
थापाको दमेक—८ का भैरबप्रसाद सापकोटासँग विवाह भएपछि आर्थिक रुपमा बिपन्न जोडी पारिवारिक र सामाजिक अपहलेनामा परेको थियो। ‘बाख्रापालेर आम्दानी गर्न सुरुवात गरेपछि परिवार र समाजले पनि राम्रोसँग हेर्न थाले,’ टुल्कीले भनिन्, ‘अहिले आफ्नै घरमा पूर्नस्थापित भएका छौँ।’ सापकोटा सम्पत्तिको खोरमा २४ बाख्रा रहेका छन्। ‘केही आम्दानी नहुँदा घर परिवार र छरछिमेकीले हेलाहोँचो गरे,’ उनले भनिन्, ‘आर्थिक अवस्था फेरिएपछि सबैसँग सम्बन्ध सुधारियो।’
थापाको आर्थिक अवस्थामा सुधार गर्न सुरुमा १२ बाख्रा उपलब्ध गराएको दीपज्योती युवा क्लब(डिवाईसी)का कार्यकारी निर्देशक तेज प्रसाद शर्माले बताए। ‘पैँचो बाख्रा सबै फिर्ता गरेर पशुपालनलाई व्यवसायीक बनाएकी छिन्,’ शर्माले भने, ‘अहिले राष्ट्रिय स्तरको पुरस्कार पाउन सफल भइन्।’
किसानले पशुपालन मार्फत आयआर्जन गरेको जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, बागलुङका प्रमुख डा. गोपाल गिरीले बताए। ‘एक जना दुर्गम गाउँको महिला किसालने ठूलो रासीको पुरस्का पाउँदा हामीलाई पनि खुशी लागेको छ,’ डा. गिरीले भने, ‘यसले किसानलाई प्रोत्साहन गर्न टेवा मिलेको छ।’
दमेकमा हेफर मार्फत ७ सय ५२ बाख्रा बितरण गरिएको थियो। त्यहाँ करिब एक हजार किसान पशुपालनमा गरिरहेका छन्। दमेक अहिले ‘मासुको पकेट क्षेत्र’ को रुपमा विकास भएको छ। ‘सुरुमा उपहार स्वरुप दिएका माउ बाख्रा किसानले फिर्ता गरेपछि अर्को किसानलाई दिने गरेका छौँ,’ निर्देशक शर्माले भने, ‘बाख्रासँगै भैँसी, बंगुर, कुखुरा पनि दिएका छौँ।’ अहिले त्यहाँका एक हजार किसान पशुपालनमा लागेको शर्माले बताए।
आधुनिक प्रविधि अनुसार खोर बनाउने प्रविधि, उपचार पद्यति, दाना, घाँस खुवाउने तरिका सिकाएपछि उत्साहित भएर बाख्रा पालनमा लागेका छन्। दमेकका किसानले अहिले १५ हजार बाख्रा पालेको दमेक गाउँ स्तरीय बाख्रा पालन समुहले जनाएको छ। त्यहाँ उत्पादन भएका बोका र खसीलाई किसानले छिमेकी गाविस कुश्मिशेरा बजार, पर्वतको फलेवास, बाग्लुङमा बेच्ने गरेका छन्। व्यवसायीहरु खरिद गर्न किसानकै गोठमा पुग्छन्।
अहिले दमेकमा किसानमा बाख्रा पाल्ने लहरनै चलेको छ। दमेक गाउँ ‘मासुको पकेट क्षेत्र’ र नमुना श्रोत केन्द्र भएको जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, बागलुङले जनाएको छ। किसानलाई निःशुल्क बाख्रा उपहार, औषधी उपचार, खोर लगायतमा अनुदान दिने गरेका छन्।। बाख्राले उत्पादन दिन थालेपछि उपहार पाएका बाख्रा किसानले अरुलाई हस्तान्त्रण गर्छन्। बाख्रापालनसँगै भैँसी, बुंगुर, कुखुरा पालन र तरकारीखेतीतर्फ पनि किसानलाई प्रोत्साहन गरिएको छ।
← 'किसान मरिसके, कसले बुझ्ने पीडा ?'
चार मुलुकबाट दुई अर्बको स्याउ आयात →
यो समाचार 35057 पटक पढिएकोबुटवल । रूपन्देही मत्स्य ह्याचरीमा आत्मनिर्भर बनेको छ । माछाको पकेट जिल्ला रूपन्देहीमा माछाका भुरा उत्पादनमा
यो समाचार 34670 पटक पढिएकोरासायनिक मल अनियमितता प्रकरण काठमाडौं । कृषि सामग्री कम्पनीले लिमिटेडले कमिसनका लागि फेरि डीएपी मल खरिद
यो समाचार 25985 पटक पढिएको GM Food Crops Illegally Growing in India • By Colin Todhunter The GM Contamination Register database is run
यो समाचार 6730 पटक पढिएकोम्याग्दी, मङ्सिर १६ गते । जिल्लाका किसान यान्त्रिक हलोतर्फ आकर्षित भएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रका किसानले